अस्पतालको करोडौं आम्दानी कर्मचारीको ‘खल्ती’ मा ! – Khabar Silo
भक्तपुर : भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको गएको भाद्र महिनादेखिको करौडौं रुपैयाँ आम्दानी अस्पतालको बैंक खातामा जम्मा नगरिएको पाइएको छ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अनुसार भाद्र महिनादेखिको करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ अस्पतालको खातामा जम्मा भएको छैन। समितिले निलम्बन गरेका अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्रा.डा. ऋषिकेषनारायण श्रेष्ठ, प्रशासन तथा वित्त प्रमुख जगन्नाथ भुर्तेल र प्रशासक राजाराम तजलेले अस्पतालको दैनिक आम्दानी खातामा जम्मा नगरी आफूहरुको खल्तीमा राखेका आरोप छ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले अस्पतालमा भक्तपुर नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि निलम्बित मेडिकल डाइरेक्टर श्रेष्ठ, प्रशासन तथा वित्त प्रमुख भुर्तेल र प्रशासक तजलेले अस्पतालको आम्दानी बैंकमा जम्मा नगरी चलाउँदै आएको आरोप जानकारी दिए।
अस्पतालको आम्दानी बैंकमा किन जम्मा नगरेको भनी प्रशासन तथा वित्त प्रमुख भुर्तेललाई प्रश्न गर्दा स्पष्ट जवाफ नदिएको उनले बताए।
‘अस्पतालको करोडौं रुपैयाँ निलम्बित मेडिकल डाइरेक्टर श्रेष्ठ, प्रशासन तथा वित्त प्रमुख भुर्तेल र प्रशासक तजलेले आआफ्नो घर लगे रे भन्ने हामीले सुनेका छौं’, उनले भने, ‘सोहीबारे प्रशासन तथा वित्त प्रमुख भुर्तेलसँग प्रश्न गर्दा स्पष्ट जवाफ दिएनन्।’
अस्पतालको करोडौं रुपैयाँ बैंकमा जम्मा नगरी अपचलन गरेकोबारे मुद्दा हाल्ने प्रक्रियामा गएको कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले दैनिक रुपमा तीन लाखमात्रै प्रशासनिक खर्चको लागि राख्न पाउने आर्थिक नियमको बर्खिलाप गरी अस्पतालको करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएको बताए।
पैसा अस्पतालमै छ : भुर्तेल
अस्पतालका प्रशासन तथा वित्त प्रमुख भुर्तेलले भने बाहिर हल्ला गरेजसरी अस्पतालको आम्दानी कसैले गोजीमा नराखेको बताए। उनले अस्पतालको आम्दानी अस्पतालमै रहेको जानकारी दिए।
अस्पतालसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चबाट किनारा नलागेकाले चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीहरुलाई तबल खुवाउन समस्या होला भनेर आम्दानी अस्पतालमै जम्मा गर्ने गरिएको उनको भनाइ थियो।
‘अस्पतालको आम्दानी अस्पतालमै छ’, प्रशासन तथा वित्त प्रमुख भुर्तेलले भने, ‘अस्पतालको मुद्दा सर्वोच्चबाट किनारा नलागेकाले तलब खुवाउन समस्या होला भनी अस्पतालमै जम्मा गर्दै आएका हौं।’
उनका अनुसार पहिले दैनिक आम्दानी संकलन गर्न बैंकका कर्मचारी आफै अस्पताल आउँथे तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि बैंकका कर्मचारी आउन छाडेसँगै अस्पतालको आम्दानी अस्पतालमै राखिएको हो।
प्रशासन तथा वित्त प्रमुख भुर्तेलका अनुसार भाद्र १ देखि २६ गतेसम्म एक करोड १७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। त्यसपछि दसैं लागेपनि सरदर दैनिक पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको उनको भनाइ थियो।
सर्वोच्चमा पेसी सरेको सरेयै
भक्तपुर नपाले अस्पताललाई दिएको जग्गा र आर्थिक सहयोग दुरुपयोग गरेको भन्दै गएको साउन ३० गते बसेको बोर्ड बैठकले अस्पताल व्यवस्थापन समिति समानान्तर हुने गरी नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा अर्को व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर श्रेष्ठ र प्रशासक तजलेको बलमा भक्तपुर नपाले अस्पतालमा हस्तक्षेप गरेको थियो। भक्तपुर नपाले अस्पतालमा नयाँ कर्मचारीहरु नियुक्तिसँगै केहीको बढुवा गर्दै मेडिकल डाइरेक्टर श्रेष्ठको कार्यावधि थप तीन वर्षको लागि थमौती गरेको थियो।
भक्तपुर नपाले अस्पतालमा हस्तक्षेप गरेपछि अस्पताल व्यवस्थापन समिति सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले गएको भाद्र १० गते भक्तपुर नपाको हस्तक्षेप अवैधानिक भन्दै मौजुदा व्यवस्थापन समितिलाई नै विनाअवरोध काम गर्न र गराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि परेको पेसी पाँचपटकसम्म सरेको छ। मंगलबारको लागि तोकिएको पेसीसमेत सरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
उक्त आदेशपछि पनि मौजुदा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु अस्पताल पुग्न सकेका छैनन्। भक्तपुर नपा र निलम्बित मेडिकल डाइरेक्टरले केही समूह परिचालन गरी व्यवस्थापन समितिलाई अस्पताल प्रवेश गर्न दिएका छैनन्। त्यस्तै नयाँ मेडिकल डाइरेक्टर भएर आउने चिकित्सकलाई समेत कालोमोसो डल्ने, जुत्ताको माला लगाइदिने धम्की दिँदै आएको छ।
जसले गर्दा अस्पतालका चिकित्सकहरु आतंकित भएका छन्। मेडिकल डाइरेक्टर श्रेष्ठ र भक्तपुर नपा पक्षधर कर्मचारीहरुको दादागिरीले अस्पतालमा एक किसिमको आतंक नै रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्। उनले मेडिकल डाइरेक्टर श्रेष्ठ र कर्मचारीहरुले चिकित्सकहरुलाई ताकी ताकी भक्तपुर नपाको विरुद्ध गए ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिँदै आएको गुनासो पोखे।
हटेनन् निलम्बित मेडिकल डाइरेक्टर श्रेष्ठ
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मेडिकल डाइरेक्टर श्रेष्ठले अस्पतालमा हस्तक्षेप गराउन भूमिका खेलेको भन्दै अस्पतालको मौजुदा व्यवस्थापन समितिले निलम्बन गरेको थियो। तर उनले निलम्बनको पत्र बुझेका छैनन्। त्यस्तै उनको म्याद गएको असोज २३ गते नै सकिसकेको छ। तैपनि उनी अहिलेसम्म अस्पतालमा मेडिकल डाइरेक्टरको हैसियतमा उपस्थित भइरहेका छन्।
गएको असोज २३ गतेदेखि दसैं बिदामा बसेका उनी सोमबार पुनः अस्पताल हाजिर भएका हुन्। उनले आफूलाई भक्तपुर नपाले आफ्नो मेडिकल डाइरेक्टर पद थप तीन वर्षको थपेको जानकारी दिए। उनीभन्दा वरिष्ठ अस्पतालका चिकित्सकहरुले सर्वोच्चको आदेशले भक्तपुर नपाको व्यवस्थापन समिति अवैधानिक भइसकेकाले कानुनी रुपमा मेडिकल डाइरेक्टरबाट हट्न उनलाई सुझाव दिएका छन्। तैपनि उनी हटेका छैनन्।
पाथीभराको ३१७ रोपनी जग्गा यती समूहलाई ८० वर्षसम्म सित्तैमा
काठमाडौं : सोलुखुम्बुको सगरमाथा निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको यती समूहले राजनीतिक प्रभावका आधारमा ताप्लेजुङस्थित पाथीभराको ३१७ रोपनी सरकारी जग्गा पनि ८० वर्षका लागि सित्तैमा लिएको छ। सो समूहले काठमाडौंको गोकर्णको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि कौडीको भाउमा लिजमा लिइसकेको छ। मोरङको विराटनगरका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठले पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्ने कम्पनी […]
अदालतमा महरा झुट बोले तर उनकै सुरक्षाकर्मीले खोलिदिए त्यो दिनको घटनाको पोल !
काठमाडाँै जिल्ला अदालतमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको करणीसम्बन्धी मुद्धामा बयान सकिएको छ भने आइतबार थुनछेक बहस हुने भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको इजलाशमा आज महराको अदालती बयान सकिएको र आइतबार थुनछेक बहस हुने तय भएको हो । काठमाडौँ अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीका अनुसार आज ३ बजेसम्म कार्यलय समय भएपनि ५ः३० बजेसम्म बसेर […]
८० लाख बिदेशिएका नेपालीलाई सम्झिदै भक्कानिए ज्ञानेन्द्र शाही, भने – म राजाबादी पटक्कै हैन
काठमाडौं । नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले लोेकतन्त्र मास्ने गतिविधिमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै संलग्नता रहेको बताएका छन् । सुत्र टिभीको ‘सुत्र बहस’सँगको कुराकानीमा शाहीले अहिले नेकपाका कायकर्ताहरु अराजक भएको बताउँदै गु ण्डागर्दी शैलीमा पटक–पटक आफूहरुमाथि आ क्रमण भएको बताए । ‘हामी सरकार र व्यवस्था विरोधी हैन तर, संविधान विरोधि तत्वहरुविरुद्ध हो । विधिमा […]